Finland waxay mas'uul ka tahay magangelyo-doonka iyo qaxootida - Asylum in Finland
Dowladaha xubnaha ka ah Midowga Yurub waxaa ka go’an inay dib u dejin Midowga Yurub ku siiyaan qaxootiga Suuriya ee hadda ku sugan dalka Turkiga. Kani waxay gaar ahaan khuseeysaa qaxootiga Suuriya ee haatan ku sugan Turkiga, kuwaas oo UNHCR soo jeedisey in dib loo dejiyo. Waxaa qorshaha dib u dejinta lagu heshiiyey in qaxooti walba ee Suuriya oo laga soo celiyo Giriigga, ay dalalka Midowga Yurub ku beddeli doonaan hal qaxooti Suuriya oo hadda ku sugan dalka Turkiga.
Waxaa kaasi dheeraad u ah, dalka Finland, Jarmalka iyo Nederland waxay ahaayeen dalalka ugu horreeya ee EU-da ee aqbaley qaxootiga Suuriya ee ka yimid Turkiga. Sannadkii 2018, Finland waxay ballanqaadday in ay qaabisho 750 qaxooti Suuriya oo ka yimid Turkiga, iyo qaxooti Congo ah oo ka yimid Zambia.
Marka la sameynaayo kala gudbinta gudaha Yurub waxaa mudnaan la siiyaa magangalyo-doonka nugulka ah
Golaha Yurub wuxuu go’aansadey inuu gudaha Midowga Yurub ku kala gudbiyo 160,000 magangalyo-doon ah labo sano gudaheeda, dhammaadka Sebteembar 2017. Sida laga soo xigtay go’aanka, dadka ku jira xaalad nugul ay ayaa mudnaan la siin doonaa.
Kala gudubka gudaha Yurub, Finland waxay aqbashay in ka badan 2,000 oo magangalyo-doon ka yimid Talyaaniga iyo Giriigga Codsiyada magangalyo ee dadkaan waxaa loo macaamili doonaa si la mid ah magangelyo-doon kale ee yimaado dalka Finland. Codsade kasta waa la baari doonaa si loo eego inuu isagu/iyadu u qalmo badbaadinta caalamiga ah ee Finland.
Dhalashada xaq u leh kala gudbinta gudaha ee dalalka Yurub waa 75% oo keliya ee loo aqoonsaday ilaalin caalami ah (magangalyo ama ruqsada degganaansho oo ku salaysan ilaalin hoosaad), marka la eego dhammaan wadamada aaga EU. Tan iyo gu’ga 2016, kuwa yimid Giriiga ma aysan u qalmin kala gudbinta dalalka Yurub, iyadoo la eegin dhalashadooda.
Aqbalidda magangelyo-doonka iyo qaxootiga, dalka Finland waxay mas’uul ka noqonaayaan magangelyo-doonka iyo waxay midnimo tusin doonaan dalalka saddexaad.
codsiga megangelyda Finland waa caawisaa